Dowladda Talyaaniga: “Ma Ogolaaneyno in Dalkeena Masaajid Laga Dhiso” – Shabakadda Amiirnuur
Dowladda Talyaaniga: “Ma Ogolaaneyno in Dalkeena Masaajid Laga Dhiso”
August 13, 2018 7:24 am by admin Views: 70
Dowladda Talyaaniga ayaa soo saartay amar ay ku mamnuuceyso in Masaajid laga dhiso dalkaas oo ay ku noolyihiin malaayiin ruux oo muslimiin ah oo isugu jira dad kasoo jeeda wadankaas iyo Jaaliyaad dalkaas safar ku tagay.
Wasiirka arimaha gudaha dowladda Talyaaniga ninka lagu magacaabo Matio Salfini ayaa sheegay in xukuumadiisa ay go’aan ku qaadatay inaaney mar dambe ogolaan in masjid cusub laga dhiso dalka Talyaaniga.
Barta uu ku leeyahay Twitterka ayuu wasiirku kusoo qoray go’aankan, wuxuuna u sababeeyay in masaajid laga dhiso dalka Talyaaniga ay cara gelineyso shacabka Talyaaniga, sidaas darteed ay mamnuuc tahay in la dhiso masaajid cusub.
Matio Salfini wuxuu waali ku tilmaamay in Masaajido hor leh laga dhiso wadankiisa, isagoona u ballanqaaday shacabkiisa Nasaarada ah ineysan jiri doonin masaajido cusub oo ay ku arkaan dalka Talyaaniga.
Talyaaniga waxaa lagu tilmaamaa wadamada ugu badan Yurub ee ay ku noolyihiin muslimiinta, waxaana qiyaas ahaan muslimiinta lagu sheegaa iney gaarayaan hal milyan iyo 613 kun oo ruux, waxaana dhalashada Talyaaniga heysta 150 kun oo ruux.
Go’aanka dowladda Talyaaniga ayaa muujinaya cadaawada fog ee si guud gaalada gaar ahana reer Yurub ay u qabaan Islaamka iyo Muslimiinta, waxaana muslimiinta Yurub ku nool ay la kulmaan tacadiyaad joogta ah iyo dhibaatooyin kala duwan.